Fanafody sinoa nentim-paharazana, fitrandrahana zavamaniry, voankazo ary dite voninkazo - HEX
HEBEI HEX IMP. & EXP. NY ORINASA dia orinasa mifantoka amin'ny fanondranana anana manta, ahitra efa novolavolaina voalohany, nalaina avy amin'ny zavamaniry, dite voninkazo, dite raokandro, nalaina avy amin'ny biby, fanafody ara-pahasalamana voajanahary. Ny fitsaboana voajanahary nentim-paharazana dia nampiasaina ho fikarakarana ara-pahasalamana mahazatra manerana an'izao tontolo izao nandritra ny taonjato maro. Ireo anana ireo dia avy amin'ny hazo, voninkazo ary zavamaniry hita any an'ala ary nambolena ho an'ny fanasitranana azy ireo nandritra ny taona maro.
MAZAVA bebe kokoa
TANY MAINTY dia mitandrina tsara amin'ny fisafidianana ireo ahitra sy vokatra ahitra. Manana fototra fambolena tsy misy fandotoana ihany koa ary mpanamboatra amin'ny fanodinana ny fitsaboana nentim-paharazana sinoa (TCM) .HEX dia misafidy ireo mpanamboatra am-pitandremana sy manara-maso tsy tapaka ny fizotry ny fifehezana kalitao ho an'ny vokatray.
Hikaroka bebe kokoa
Manohana ny fahasalaman'ny rafi-pisefoana, ny hery fiarovan'ny vatana, ny rafi-pitabatabana, ny sinus, ny vavony sy ny tsinay ary ny fiadanam-bahoaka amin'ny ankapobeny.
Manohana ny fahasalaman'ny rafi-kery sy ny gastrointestinal system. Manampy amin'ny fanalefahana ny fahafenoan'ny kibo. Ingredients Patchouli, ravina Perilla, Angelica dahurica, Atractylodes macrocephala (endasina), hoditr'i Tangerine, Pinellia (vita), Magnolia (vita amin'ny sakamalao), Poria, Platycodon, licorice, vavonin'ny vilany, jujube, sakamalao. Fitaovana: Tsy misy toetrany Ity pilina ity dia pilina mavo mavo mavo; manitra, mamy ary mangidy kely. Fitandremana 1. Tokony ho maivana ny sakafo. 2. Tsy toro-hevitra ...
Ny fanafody nentim-paharazana sinoa nentim-paharazana dia pilina, vovoka, fanomanana kapsily, ranon-dra am-bava ary fanomanana fanafody nentim-paharazana sinoa vita amin'ny sombin-kazo sinoa. Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina, fisorohana aretina ary hampiroborobo ny fahasalamana.
Fitrandrahana Cranberry: Ny fitrandrahana cranberry dia misy flavonoid voajanahary sy Procyanidins, izay afaka mamerina ny herin'ny Collagen, manao ny hoditra ho malama sy miolaka, dia tara-masoandro voajanahary, afaka manakana ny fahasimban'ny UV amin'ny hoditra, ny fiasan'ny antioxidant tena tsara, ny fahanterana, hiarovana ny fahasalaman'ny fo sy ny fo ary koa ny fisorohana mahomby sy ny fitsaboana adjuvant ny aretin-kibo vehivavy lehibe
Fitrandrahana Diosgenin: antsoina hoe "volamena fanafody" amin'ny sehatry ny fitsaboana. Diosgenin dia akora fototra ilaina amin'ny famokarana hormonina steroid. Ny hormonina steroid dia manana fiantraikany mahery vaika amin'ny fanoherana ny aretina, fanoherana ny allergy, fanoherana ny virus sy anti-shock, dia ny fitsaboana ny rheumatism, ny aretim-po, ny leukemia amin'ny lymphoblastic, ny encephalitis amin'ny sela, ny aretin-koditra, ny fivontosana ary ireo marary mitsikera ny fampiasana manan-danja ny zava-mahadomelina; Io no akora misy amin'ny fitondrana vohoka Ketenolo ...
Stevioside (CNS: 19.008; INS: 960), fantatra ihany koa amin'ny hoe Stevioside, dia glycoside nalaina avy tamin'ny ravina Stevia Rebaudia (Stevia), fianakavian'ny zavamaniry ao amin'ny fianakaviana mitambatra. Ny sandan'ny stevia siramamy Stevia dia 1/300 fotsiny amin'ny sukrosa, tsy voatsindrona aorian'ny fisotroana vatan'olombelona, ​​tsy mamokatra hafanana, mety ho an'ny diabeta sy ireo marary matavy loatra. Rehefa mifangaro amin'ny sucrose fructose na siramamy isomerika i Stevia dia azo hatsaraina ny mamy sy ny tsirony. Azo ampiasaina amin'ny vatomamy, mofomamy, zava-pisotro, s ...